Imixokelelwane yebhayisekile zizinto ezilahliweyo ze 'Unchained' | Izidalwa ezikwi-Intanethi
'Ayibotshwanga', ingqokelela yobukhulu bobomi bemifanekiso eqingqiweyo yenja eyenziwe ngesinyithi esilahliweyo
Ukuba basinike uninzi lweetyathanga zebhayisekile kwaye basixelela ukuba masenze umfanekiso kubo, ngokuqinisekileyo kunjalo Sijonge ngobuso obuphambeneyo kulowo uphakamisayo loo mbono, kodwa ukuba badlula ezandleni zikaNirit Levav, ngokuqinisekileyo ukuba kwiintsuku ezimbalwa sinokumangaliswa kukuvela kwakhe kunye nobuchule xa esenza iinzipho zenja.
"Akudityaniswanga" yi ingqokelela yobungakanani bemifanekiso eqingqiweyo Izinja ezenziwe ngamalungu ahlaziyiweyo eebhayisekile, endaweni yazo yimixokelelwane yazo. Into ephawuleka kolu luhlu lwemifanekiso eqingqiweyo kukuba bathimba imvakalelo yeenja kwiintlobo zazo ezahlukeneyo kunye neendawo ezahlukeneyo ezinamaxesha athile okwexeshana.
I-Levav iyakwazi ukubamba izinja ngamaxesha kunye neenkcazo ezenza ukuba umntu akholelwe ekuqaleni ukuba zenziwe ngentsimbi. Inyaniso eyiyo Ukubetha ngenene Inja nganye eqingqiweyo ayenzayo kule projekthi ibizwa ngokuba yi «Unchained».
UVitanovsky ngomnye umzobi ohambe ngale migca kwaye wasibonisa bonke ubugcisa bakhe ekuqingweni kunye nalaa nkunzi inkunkuma, okanye U-Hun Lek kunye nomdla wakhe kwi-Hulk kwaye oko umfanekiso omkhulu Kule nto inezinto eziphinda zisetyenzisiwe isiseko sokusizisela imigca yaloo mlinganiswa ohlekisayo.
UNirit Levav ngu uyilo olwahlukeneyo kunye nomculi eye yahambelana kakhulu nobugcisa kunye nokurisayikilisha. Kule minyaka yomsebenzi ophumeleleyo uzenzele njengomyili wefashoni oqhubeka nokuphonononga nokuvavanya izinto ezahlukeneyo, ngelixa eqhubeka nokuziqhelanisa nezakhono zakhe ekwenzeni izacholo, esebenza ngentsimbi okanye nangeeseramiki.
Kukule minyaka idlulileyo eyiLevav Ukusebenza ikakhulu ngezinto zokurisayikilisha ezinje ngemixokelelwane yebhayisikile, iipiston zesithuthuthu, izitshixo okanye iiwotshi. Unayo iwebhusayithi yakho kule khonkco ukulandela umsebenzi wakhe ogqwesileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » 'Ayibotshwanga', ingqokelela yobukhulu bobomi bemifanekiso eqingqiweyo yenja eyenziwe ngesinyithi esilahliweyo
Izenzo ezingama-200 zamahala zeAdobe Photoshop kunye neLightroom
Igcisa laseThai lenza ubugcisa be-3D ngokupeyinta ngeendlela zomsonto kunye nomnatha